Tekinoroji yeDolby Altmos ichave iripo muApple TV app pane LG terevhizheni | Ndinobva mac
Tekinoroji yeDolby Altmos ichave iripo muApple TV app yeLG terevhizheni
Mazuva mashoma apfuura, mugadziri weKorea LG yakazivisa kuti iri kuvhura iyo Apple TV app kune ese maTV mamodheru aakatangisa muna 2018 uye ayo anoronga kushambadzira mukati me2019, nekudaro vachitevera tsoka dzeSamsung, Sony uye Vizio, ivo vatatu vanogadzira izvo ivo vanobheja pane Apple yekushambadzira masevhisi.
Asi handiyo yega yega inoenderana neichi chigadzirwa iyo vashandisi veLG vangave vanofarira, sezvo maawa mashoma apfuura yakazivisa kuti ichapawo rutsigiro rweDolby Atmos, ndiko kuti, mumamodheru akasarudzwa ayo yaakatangisa pamusika kubvira 2018. Tsigiro yeDolby Atmos ichavhurwa pakupera kwegore.
Mune zvirevo zvakaitwa nemutauriri weLG kune iyo FlatpanelsHD svikiro, hapana zuva chairo rakatsanangurwa kana kana rutsigiro ruchizowanikwa pane ese mamodheru neApple TV application uye neAirPlay 2 mashandiro, asi zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti kwete, kubvira "akasarudzwa mamodheru" chinhu zvimwe dzikamisa iwe kune anodhura mamodheru.
Dolby Atmos inoenderana neApple TV, asi kwete ne Samsung TVs uye kwete neRoku uye Fire TV set-top mabhokisi kunyange vese vari vaviri vanotipawo iyo Apple TV application. LG vhiki ino yakava yekutanga mugadziri weTV kupa Dolby Vision (HDR) rutsigiro kubva kuApple TV app - nekutenda, haizove yega.
Zvichida vese Samsung uye Sony uye Vizio vachapa rutsigiro rwakafanana kune ese maviri maDolby Atmos uye HDR mune ramangwana kugadzirisa. Kana iwe uchida kuvandudza yako yekare terevhizheni, mune yangu chaiyo kesi Ndingabheja SamsungKana iwe usiri kuda kuve nezvinetso zvezvikamu kuitira kuti terevhizheni yako inomira kushanda, sezvazvakaitika kwandiri neterevhizheni yandakatenga kubva kuLG uye mushure memakore maviri pakange pasisina zvimwe zvikamu zvekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tekinoroji yeDolby Altmos ichave iripo muApple TV app yeLG terevhizheni
Inoshamisa iMac Pro pfungwa yakagadzirwa naJermaine Smit
Dambudziko remwedzi wemoyo ikozvino rakagadzirira